Home YURUB IYO YURUB Sheekooyinka dhalinyarada ee Sheekooyinka dhalinyarada ee Sheekha
Sheekooyinka dhalinta yar ee sheekada gabdhaha sheekada ee "The Mendy Story Story"
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Best Genius' The Kyliean Mbappe of Left-Backs. Dabeecadda Weyn ee Weyn ee Merty Mendy Sheekooyinka Xogta Lahaa Xogta waxay kuugu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda.
Sheeko-carruurnimo Ferland Mendy - Falanqaynta
Falanqayntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, taariikhda qoyska, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka, qaab nololeedka iyo nolosha qofka.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu ahaa mid ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa ee daafaca bidix ee adduunka ku jira xilli ciyaareedkii 2018-2019, taasoo keentay inuu iibsado Real Madrid. Si kastaba ha noqotee, qaar yar oo keliya ayaa tixgelinaya biography Ferland Mendy taas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Ferland Mendy waxa uu ku dhashay maalintii 8th ee June 1995 waalidiinta Afrikaanka ah ee wadaagga ah ee Meulan-en-Yvelines, waqooyiga dhexe ee Faransiiska. Goobta uu ku dhashay waxay la mid tahay tan Abdoulaye Doucoure, saaxiibkiisa Faransiiska ah iyo MA taas oo ah Benjamin Mendy kuwaas oo taageereyaashu u maleynayaan inuu yahay walaalkiis ama xubin qoys.
Ferland waxay ku dhalatay qoys xishood ah. Isagoo ka eegaya muuqaalkiisa, si fudud ayaad u maleyn kartaa in waalidkiis uu ka mid yahay asal ahaan Afrika- taasi waa run.
Sida laga soo xigtay warbixinta, hooyada Ferland Mendy hooyadeed waxay ka soo jeeddaa Guinea (Galbeedka Afrika) halka aabbihiisna uu ka soo jeedo Senegal (Galbeedka Afrika). Waxaa suurtagal ah in waalidiinta Ferland Mendy ay ahaayeen kuwii hore ee muhaajiriinta ah oo markii hore ka tagay wadankooda Afrika, degganaayeen Faransiiska, ay la kulmeen, jacayl iyo ku dhashay.
Warbixin kale oo aan la xaqiijin ayaa waxaa ka muuqda in Ferland Mendy uu lumiyey aabihiis intii uu ilmo ahaa, isaga oo hooyadiis iyo dadka saboolka ahba ka badbaaday inay naftooda ku badbaadaan, oo ay adag tahay in la siiyo.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Ferland waxay ku soo korodhay xaafad adag. Ma jirin ciyaaro ama cayaaro markii uu yaraa, kubbada cagta ama wax kasta oo uu ku bedeli karo qaab ciyaareed kubadeed. Intaas waxaa sii dheer, nasiib darro ayaa ku dhamaatay markii uu cagaha midig ka ahaa.
Markii ugu horreysay, Mendy waxa uu noqday hooyo hooyadeed sababtoo ah kubada xad-dhaafka ah. Mahadsanid, waxay mar dambe ogaatay in kubada cagta ay ahayd talada wiilkeeda. Xitaa Ferman Mendy's ilmo adeerkiis Marc Gomis mar hore ayuu sharaxay sida uu Mendy u kordhay. In erayadiisa;
"Mar walba kubad ayuu ku ciyaaray. Inkastoo uu yaraa, BUT marwalba way adag tahay. "
Ka hor inta uusan kubada cagta u dhigin xirfaddiisa, saaxiibkiisa caruurnimada Mangane Yaya mar uu soo xasuustay in Mendy uu ku dhawaaqay "Xawaare, Xawaare"Sida uu uga cararay daafacyada isagoo ciyaaraya da'yar.
Sida cunug, dhammaan Ferland Mendy waxa uu doonayay inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah. Wuxuu lahaa go'aan aad u badan iyo gaajo ah in qof kasta oo ogaa inuu dib u arki karo indhahiisa. Go'aankaas oo kale wuxuu arkay isaga oo lagu martiqaaday tijaabooyin.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Nolosha Mudnaanta Hore
Dareenka Mendy ee kubada cagta wuxuu arkay isaga oo tijaabinaya tijaabada iyo qorista naadiga deegaanka, Ecquevilly EFC oo fursad u siiyey inuu soo bandhigo xirfadiisa iyo xirfadiisa ciyaareed. Thanks to speed, Ferland ayaa bilaabay inuu noqdo weeraryahan. Waxa uu si dhaqso ah uga dhex muuqday kooxda, waxaana uu soo jiitay Paris Saint Germain.
Da'da 9 sanadka 2004, Ferland Mendy ayaa aqbashay akadeemiyadda Paris Saint-Germain Academy. Intii uu joogay kooxda, tababaraha ayaa bedelay daafac bidix. Xitaa sida daafaca bidix, Ferland ma uusan ciyaarin ciyaartoy sida jilicsan Ashley Cole, Philip Lahm, Roberto Carlos iyo Paolo Maldini. Waxa uu sameeyay oo dhan wuxuu ahaa inuu ku daydo geeridiisa - mid kale oo aan ahayn kan weyn Ronaldinho.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Waddo adag oo lagu sheekeysto sheekada
Ferland sii joogitaanka garoonka PSG iyadoon la qorsheynin. Dhowr sano ka hooseysa xariiqda Paris, saboolka saboolka ah wuxuu ka soo gaaray dhaawaca sinta taas oo keentay in lagu xannibo arthritis. Ferland waxa ay la kulantay barar dhuunta wadnaha, guud ahaan daciifnimada iyo daalka, xaaladaas oo mustaqbalkeeda shaqadeeda u keentay joogsi buuxda.
Isticmaalka Kursiga Kursiga:
Ferland sanad ayaa ka socotay kubadda cagta. Saddexda bilood ee ugu horreeya, wuxuu xirxiray qashinka laf-dhabarka waxaana raacay dhowr daaweyn xanuun ah bilihii kale ee 3. Sababtoo ah ma socon karin sababta oo ah xanuun muruqa ah, saboolka Ferland wuxuu bilaabay isticmaalka kursi curyaanka oo soconayey bilaha 6.
Sheekada Ferland Mendy Wheel Story- Credit CL iyo BR
Maxaa Dhakhtarku u sheegay:
Ma ogeyd?… Inkasta oo Ferland uu ku sugnaa cusbitaalka Necker, dhakhtarkiisa ayaa u sheegay inuu marnaba kubadda cagta ciyaari doonin sababtoo ah dhibaatadiisa. Jebinta warkan waxay sababtay xanuun badan, isaga iyo qoyskiisaba, saaxiibo iyo qaraabo.
Rabshadaha Cadaadiska ah:
Ka dib markii uu ka baxay isbitaalka, ayaa saboolka Ferland Mendy uu muddo dheer xanuun badan ku jiray Bullion, oo ah wada-xaajoodka qaybta Yvelines, waqooyiga dhexe ee Faransiiska. Marka hore, wuxuu bartay sida loo maro mar kale ka hor inta uusan dhismin murqaha lumay.
Shirkadda Ferland Mendy Road. Lacagta IG
Iyadoo dib loo cusbooneysiiyay, Ferland Mendy ayaa wax uun maskaxda ku haysay- "Doonista in la caddeeyo dhakhtarkiisa WRONG!"
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Kusoo sharax sheekada
Ku laabashada kubadda cagta:
Ka dib bilo ka dib rehab, Mendy ayaa ugu danbeyntii ku soo laabtay kubadda cagta. Waxa uu ku biiray Mantois 78, oo ah koox ku salaysan duleedka caasimadda Faransiiska. Naadiga, Mendy ayaa muujiyay inuusan aheyn mid soo kabsasho buuxda laakiin waa uu ka xoog badnaa intii uusan dhaawac ka soo gaarin.
Ferland Mendy Rise si loogu magacaabo sheekada - Soo celinta Badan
Inkastoo uu u ciyaarayo Mantois 78, Mendy waxa uu arkay Le Havre, oo u saxiixay June 2013. Saxiixa naadigu wuxuu ahaa tallaabo loogu talagalay dhalinyarada, kuwaas oo arkay aragti fiican oo ay ku muujinayaan farshaxiisa iyo noqdaan xirfadle.
Inkastoo xirfadiisii ​​xirfadeed ee Le Havre, horumarka Ferland Mendy uusan ka muuqan naadiyada ugu sareeya Faransiiska. Waxaa lagu arkay Olympique Lyon oo shan sanno oo heshiis ah u saxiixay kaliya 5 milyan euro bishii June 2017.
Naadiga, Ferland waxay isla markiiba bilaabay inay sameyso cinwaanada isboortiga. Waxa uu noqday mid ka mid ah daafacyada bidix ee ugu fiican Yurub, kaasoo ah mid aad ugu habboon qaabka casriga ah ee casriga ah. Hoos waxaa ku qoran caddayn cadaymo muuqaal ah. Ku darso Real Madrid.
Sida lagu arkay fiidiyowga kor ku xusan, isagoo deg deg ah, awood leh oo awood u leh inuu boobo iyo hoos u dhigo garbaha sameeyay Ferland Mendy mid ka mid ah guryaha ugu da'da yar ee Europe iyo kuwa ugu xoogan ee bidixda adduunka.
Ferland Mendy Rise si sheeko cajiib ah. Ku darso Goal
Xilligii la qorayay, Ferland ayaa haatan heysta rikoorka ku dheehanaya 102 labadii xilli ciyaareed ee uu ka ciyaari jirey Olympic Lyon, oo ka badan daafac kasta oo kale oo ka ciyaara horyaalka Ligue 1 iyo horyaalada 5 Yurub.
Ferri, waxa ay aheyd guulo badan oo shaqo adag ah oo keentay macalinka Real Madrid Zidane isaga oo ka dhigaya inuu ka mid noqdo ciyaartoyda dhisaya mashruuca Los Galacticos markale. Inta kale, taageerayaasha kubadda cagta ayaa sheegi doona taariikhda.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Nolosha Xiriirka
Tan iyo markii uu ku biiray Real Madrid, taageerayaasha kubadda cagta ayaa bilaabay inay weydiistaan ​​su'aal ku saabsan nolosha xiriirka Ferland Mendy. Xilliga qorista, su'aalaha ku saabsan bushimaha qof kasta waxay ahaayeen; "Muxuu yahay saaxiibka Ferland Mendy ee gabadha ama gabadha?", "Miyuu Rodri leeyahay saaxiib saaxiib ah?" AMA "Miyuu Ferdin Mendy guursaday?"
Ferland Mendy Life Life. Ku darso PESFaces
Waalidiinu ma jiraan wax been abuur ah oo muujinaya in Ferman uu muuqaalkiisa mugdi ku jiro uuna ka dhigi doonin geedka canabka ah ee jecel in ay jeclaan lahaayeen in uu ahaado saaxiibkiisa iyo xaaskiisa.
Si kastaba ha noqotee, sida wakhtiga qorista, waxaa jira jacayl qarsoodi ah oo loogu talagalay Ferland. Waa jacayl ka baxsan isha lagu hayo indhaha dadweynaha sababtoo ah jacaylkiisu waa mid gaar ah oo laga yaabo inuu yahay mid aan riwaayad lahayn. Waa arrin kaliya waqtigii aan ogaan lahayn in haddii Ferland leeyahay xaas ama saaxiibo.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Naftaada Shaqsiga
Helitaanka in la ogaado nolol shakhsiyadeed Ferland Mendy waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah.
Shirkadda Ferland Mendy. Ku darso Orange Sports
Isagoo ka werwersan jidkiisa si loogu magacaabo sheekada sheekada, waxaad fahmi doontaa in Ferland ay dooneyso inay guuleysto. "Waa dabeecaddayda. Had iyo jeer waan jeclaa taas"Ayuu yiri Ferland, oo awoodeeda iyo rabitaankooda ay ku guuleystaan ​​inay ku guuleystaan ​​oo keliya goobta, laakiin maaha jikada.
"Ferland waa cunto karis ah,"Ayuu yiri ilma adeer, Marc Gomis."Waxa uu samayn karaa baasto, laakiin waxaan u maleynayaa inuu tayadiisa uu meel kale ka jiro, "Ayuu yiri Gomis.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - LifeStyle
Inaad hesho 48m euros (+ 5m euros ku darsaday) hubaal waxaad ka dhigi kartaa Ferland Mandy inta ugu qaalisan ee daafaha bidixda ee taariikhda. Tani, si kastaba ha ahaatee, uma tarjunto hab nololeed quruxsan oo si sahlan loo ogaan karo iyada oo la isticmaali karo gawaarida quruxda badan leh, gabdhaha quruxda badan iyo habdhiska. Ferland waxay jecel yihiin inay waqti fiican ku qaataan adeerkayaga iyo asxaabtiisa.
Xaqiiqooyinka LifeStyle ee Ferland Mendy
Inta badan ciyaartoyda kubadda cagta waxay jecel yihiin xayawaankooda iyo Ferland Mendy ma aha mid ka reeban. Xitaa waxaad ku jirtaa inaad sheegto in aysan jirin daacadnimo ka tagto ciyaarta casriga ah, hubaal ma tixgelinayo xiriirka ka dhaxeeya Ferland Mendy iyo xayawaankiisa Dolphine.
Sidee Ferland Mendy u isticmaashaa lacagtiisa
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Nolosha Qoyska
Inaan ku biiro Real Madrid oo aan shaki ku jirin inay isha ku hayaan qof walba iyo xubnaha qoyska. Xitaa xitaa xubnaha qoyska Ferman Mendy ayaa la sameeyey caan ah, noloshooda shakhsiyadeed weli wali waa garasho.
Iyadoo paparazzi had iyo jeer ku jirta hababka iyo siyaabaha badan ee macluumaadka wax u dhimi kara barta iyo warbaahinta bulshada, way adag tahay Ferland Mendy in uu qoyskiisa oo dhan ka ilaaliyo indhaha dadweynaha. Magacyada xubnaha qoyskiisa, qaraabada, xitaa waalidkiis sida wakhtiga qorista weli waa laga qariyay warbaahinta. Ka gaaban posts, wargeysyada bulshada, waxay u badan tahay in mid ama dhammaan kuwa hoos ku xusan ay noqon karaan xubinkiisa qoyska ama ina-adeer ama qaraabo.
Ferland Mendy Nolosha Qoyska. Lacagta IG
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Miyay Ferland Mendy la xiriirtay Benjamin Mendy?
Ferland iyo Benjamin Mendy Xiriirka. Ku darso Sport.net
Taageerayaal badan ayaa waydiiyay haddii Ferland iyo Benjamin Mendy waa walaalo yihiin ama waxay la xiriiraan habab. Tani waa sababta oo ah xaqiiqda ah in isbeddel badan oo udhaxeeya labada nin, xaqiiqo ah in dadku hadlo. Tusaale ahaan, labaduba waxay wadaagaan magac isku mid ah, labaduba waa Faransiis, labadoodaba dib ayay u laabanayaan, labaduba waxay u dhintaan timo cad.
Ka dib markii cilmi-baaris culus, waxaan ogaanay in labada Ferland iyo Benjamin labadaba aan la xiriirin. Isbarbardhiggan ayaa la mid ah tan Kyle Walker Peters iyo Kyle Walker kuwaas oo labadoodaba ka ciyaara baalasha la midka ah waxayna ka soo jeedaan waddankaas.
Ferland waa mid ka mid ah ciyaartoyda si fiican loogu soo tabiyay qeybta Gesture. Taageerayaashu waxay dareemeen cabsida sharafeed ee Ferland sida meel kale oo loo siman yahay Salt Bae. Taageerayaasha labada ayaa sidoo kale sameeyay caricature of isaga, iyadoo la isticmaalayo sawir la mid ah isaga oo kor u xadhig.
Xaqiiqda Raadinta Sharciga ee Ferland Mendy. Ku darso Twitter
Taariikhda hore ee Astronomical Life:
Ma ogeyd?… Ferland Mendy Taariikhda hore ee nolosha ayaa la soo koobay si ay u noqoto mid asal ah. At 14, dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in uusan waligeed mar dambe ku soconaynin marka uu ku dhaco arthritis ee suuxdinta. Hada ayaa si dhaqso ah ugu sii gudbi doona 17, Ferland ayaa ka tagay PSG si ay ugu biiraan kooxda Division 4th ka dib markii ay sii fiicnaayeen. At 20, wuxuu xirfadle u noqday Le Havre. At 22, wuxuu ku biiray Lyon oo magaciisana u sameeyey. ugu dambeyntiina, 24, wuxuu noqday ciyaaryahankii Real Madrid. Dhammaan dhacdooyinkan waxay ku dhaceen sannadihii 8.
Dib u Celinta ugu fiican marka laga reebo ...:
Ma ogeyd?… 2018 / 2019 xilli ciyaareedkan, kaliya hal dhabarka bidix ayaa loo arkaa mid ka wanaagsan Ferland Mendy. Marka laga reebo Andrew Robertson, oo aan ka dhaqaaqi doonin Liverpool, ma jirto ciyaaryahan hibo leh oo door ka ciyaara.
Akadamiyadiisa wuxuu soo saaray BIG Stars:
Ma ogeyd?… Le Havre mid ka mid ah akadeemiyada dhallinyarada ugu fiican Faransiiska - mid ka mid ah ciyaartoyda soo saarey sida Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Lass Diarrá, Paul Pogba, Dimitri Payet, Steve Mandanda, Pierre-Emerick Aubameyang.
Sheeko dhalinyaro ah oo sheeko xariir ah - Soo koobista muuqaalka
Fadlan ka raadi hoosta, fiidiyoogeena YouTube Soo koobida boggan. Si wanaagsan Booqo, Abaalmarin inaga Youtube Channel oo guji Bell Icon ogeysiisyada.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Dabiiciga ah ee Shimbirta Mendy iyo Xaqiiqooyinka Looga Hadlayo. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Lyon Wareysiga Kubadda Cagta
Foomkan faallooyinka ayaa ku hoos jira ilaalinta nabdoonaanta
YURUB IYO YURUB334
Robinho Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weyn
Sergio Ramos Dabeecada Sheeko Xogta Wanaagsan Lahaa